“Waxaan kasoo badinay kooxda Roma”… Julen Lopetegui oo fariin cad u diray kooxda Atletico Madrid – Gool FM
“Waxaan kasoo badinay kooxda Roma”… Julen Lopetegui oo fariin cad u diray kooxda Atletico Madrid
Dajiye September 28, 2018
(La Liga) 28 Sab 2018. Macalinka kooxda Real Madrid ayaa xaqiijiyay inaysan u kala baxsaneen kooxaha ay Los Blancos la ciyaareyso kuwa waaweyn iyo kuwa yaray intaba.
Dhinaca kale macalinka reer Spain ayaa digniin culus u diray kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Atletico Madrid, kahor kulanka Madrid Derby ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan garoonkeeda Santiago Bernabeu.
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa kulanka adag ay Sabtida kula ciyaari doonaan Atletico Madrid garoonkeeda Santiago Bernabeu, kadib guuldaradii 3-0 ahay ee kasoo gaartay kooxda Sevilla Arbacadii lasoo dhaafay.
“Kulan kasta ee aan ciyaareeno waa inoo muhiim, laakiin derby Madrid wuxuu inooga muhiimsan yahay kulamada kale, sida ay ila tahay kulanka wuxuu noqon doonaa mid garbo siman kaliya waxaan u baahanahy inaan dadaal bixino”.
“Waan garaaci karnaa Atletico Madrid, waxaan lasoo ciyaarnay kooxo waaweyn, sidoo kale Roma ma ahan koox yar, waxaan diyaar u nahay inaan la ciyaarno koox kasta ee inaga hor imaado, dhamaan kooxaha, waa muhiim, ma jiraan kooxo waaweyn iyo kuwa yar”.
Rivaldo oo sharad ku galay kooxda guuleysan doonto kulanka Madrid Derby ee Sabtida ka dhici doono Santiago Bernabeu
Jose Mourinho oo sharxaad ka bixiyay sababta uu kabtan ku xigeenimada uga qaaday Paul Pogba